Global Voices teny Malagasy » Fenitra Any Tibet Sy Ny Faritr’i Uyghur Ny Fahatapahan’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Janoary 2014 21:43 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Shina, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Lasa zavatra mateti-pitranga ny faharetan'ny fikatsoan'ny tambajotra ao Uyghur sy any amin'ireo faritra Tibetana vitsy an'isa any Andrefan'i Shina, araka ny fitanisàn'i Christopher Beam tao amin'ny lahatsoratry ny New Republic  voalaza etsy ambony. Mino ny fanjakana Shinoa fa ireo hery vahiny, toy ny Governemanta Tibetan any an-tsesintany  sy ny Kaongresin'ny Uyghur Erantany  dia tafiditra ao anatin'ny fikarakaràna hetsika fitakiana fisintahana ao Shina. Mba ho fikatsahana ny hifehezana ireo korontana sy tsy hafaliana any amin'ireo faritra misy fifandirana dia nanery ny fanakatonana ny aterineto ny fanjakana, manakana ny olona tsy hianoka ny zony hifanerasera ety amin'ny aterineto. Aminà tranga somary henjana kokoa dia tonga hatramin'ny fikatonan'ny tambajotranà finday ao an-toerana ny fanakatsoana.
Tany amin'ireo Prefektiora Mizaka tena ao Tibet no nanomboka ity karazana “sazy ara-politika  ity, niaraka tamin'ny korontana politika tao Lhasa tamin'ny taona 2008. Nikatona tamin'ny volana Martsa 2008 ny aterineto, ary niverina kely fotsiny ny volana Desambra 2008, ka tapaka indray afaka volana vitsivitsy taty aoriana rehefa nitranga voalohany ny hetsi-panoherana tamin'ny alalan'ny fandoroana tena. Tsy marin-toerana intsony mihitsy ny fidirana aterineto tamin'io faritra io nanomboka teo.
Araka ny filazan'ny bilaogin'i Woeser, Tibetana mpanoratra sady mpanohitra , dia tapaka tsy nifandray tamin'ny Aterineto erantany ny fahazoana aterineto sy ny SMS amin'ny finday ho an'ireo tanàna maherin'ny 18 avy ao Garze, Prefektira Mizakatena ao Tibet, nandritry ny telo volana farafahakeliny nanomboka ny Febroary 2009. Toerana maro tao amin'ny Prefektioran'i Aba, izay Tibetana no betsaka ao aminy, no niaritra ny mafy mitovy amin'izany. Lasa fenitra ankehitriny ny fahatapatapahan'ny fahazoana aterineto any amin'ny toerana misy fifandirana izay matetika ahitàna hetsi-panoherana amin'ny alàlan'ny fandoroana tena sy fanehoan-kevitra manohitra ny governemanta. Vao haingana no nisy fanakatonana tambajotra tao amin'ny fari-piadidian'i Dirut , taorian'ny hetsi-panoherana ny politika iray mitaky ny tsy maintsy ametahan'ireo Tibetana amin'ny tanàna iray ao an-toerana hametraka ny sainam-pirenena Shinoa teny ambony tafon-tranony.
Natrika fanamby mitovy amin'izany ny faritr'i Xinjiang, izay vondrona Silamo Uyghur vitsy an'isa no tena monina ao. Tao anatin'ieo hetsi-panoheran tamin'ny taona 2009 no niatrehan'ny mponina ny fikatonana lavarenin'ny aterineto naharitra efa ho taona iray ary tonga hatramin'ny tsy fahafahana miantso an-taroby nandritry herinandro izany arakaraka ny tsy fandriam-pahalemana. Hatramin'io no nahatapatapaka kely eny ny tambajotra nandritry ny vanim-potoana saropady ara-politika. Ny volana Martsa 2013, nipoaka ny hetsi-bahoaka rehefa matinny tsindrona antsy nataonà Shinoa iray avy any Han tao amin'ny fari-piadidian'i Piqan, prefektioran'i Turpann ny zazalahy Uyghur iray fito taona, nitondra nakany amin'ny fampikatsoana ny aterineto nandritry ny telo andro. Nikatona vonjimaika indray ny aterineto tao Urumqi ny faraparan'ny volana Jona mba hanakànana ny fielezan'ny tsaho nifandray tamin'ny fandravàna an-terisetra tao amin'ny fari-piadidian'i Piqan — olona miisa 27 no namoy ny ainy  [zh] tamin'ny fifanandrinana feno herisetra teo amin'ny mpanao fihetsikesehana sy ireo polisy nanodidina ireo fandravàna.
Ny hetsi-panoherana ny fandravàna tao aminny fari-piadidian'i Piqan notanisaina etsy ambony ohatra dia nosokajian'ny fampahalalam-baovaom-panjakana ho toy ny “fanafihana miharo fampihorohoroana” . Rehefa nanandrana ny hitatitra momba ilay raharaha ny vondrom-piarahamonina Uyghur, tamin'ny fanaparitahana hevitra hafa momba ilay tantara  tamin'ny alalan'ny Sina Weibo, dia niely hatrany amin'ny fari-piadidian'i Piqan ka hatrany Urumqi, tanàn-dehibe ngeza indrindra ao Xinjiang, ny fampikatsoana ny aterineto. Niatrika raharaha mitovitovy amin'izany ireo olon-tsotra mpanao gazety tao amin'ny fari-piadidian'i Bachu tamin'ny volana lasa, rehefa samy nalaky tamin'ny fanondroana ireo korontana ho toy ny fanafihana miharo fampihorohoroana ny manampahefana tao an-toerana sy ny haino amn-jerim-panjakana, ka nentina nanamarina ny fanagiazana ny vaovao. Maro tamin'ireo Sinoa Han no nanaraka ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fanazavana ny korontana tao Xinjiang ka nanakiana mihitsy ireo vondron'olona aza hoe tsy nahay nankasitraka ireo politikam-panavahana ny resaka foko, toy ny tsy fanerena hanaraka ny politikan'ny Zaza Tokana na ny didy manakana tsy hiterahana afa-tsy zanaka tokana ihany. Satria ireo Shinoa Han no tena mameno ny tontolon'ny aterinetom-bahoaka, dia nandeha lavidavitra kokoa tamin'ny fanaovana anjorom-bàla ny vondrom-piarahamonina any amin'ireo faritra tsy mandry fahalemana ny fanehoan-kevitry ny fampahalalam-baovaom-panjakana mahazatra.
Tsy nijanona tany amin'ireo faritra nisy fifandirana ara-poko ihany ny fikatsoan'ny Aterineto. Ny volana Jona 2009, dia nakatso nandritry ny andro vitsy ny Aterineto  tao Hubei tanàn-dehiben'ny faritanin'i Shishou  taorian'ireo korontana nateraky ny filazana ho famonoana tovovavy iray miasa tao aminà trano fandraisam-bahiny tao an-toerana. Kanefa i Shishou dia mifandray amin'ireo tanàn-dehibe hafa — niely nanerana ny mediam-bahoaka Shinoa ny vaovao momba ny zava-nitranga sy ny fampikatsoana ary nadika  tamin'ny fiteny Anglisy mihitsy aza ho an'ny mpamaky manerana izao tontolo izao. Rehefa tena dinihana anefa dia tsy nampikatso ny tanàna ilay fampikatsoana aterineto raha nety ho any Xinjiang na Tibet.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/24/55889/
 New Republic: http://www.newrepublic.com/article/115709/chinas-aba-county-where-government-shut-internet
 Governemanta Tibetan any an-tsesintany: http://en.wikipedia.org/wiki/Tibetan_government-in-exile
 Kaongresin'ny Uyghur Erantany: http://en.wikipedia.org/wiki/World_Uyghur_Congress
 “sazy ara-politika: http://en.wikipedia.org/wiki/2008_Lhasa_violence
 hetsi-panoherana tamin'ny alalan'ny fandoroana tena. : https://www.savetibet.org/resources/fact-sheets/self-immolations-by-tibetans/
 filazan'ny bilaogin'i Woeser, Tibetana mpanoratra sady mpanohitra: http://woeser.middle-way.net/2009/03/310.html
 tao amin'ny fari-piadidian'i Dirut: http://www.tchrd.org/2013/10/diru-under-lockdown-one-tibetan-sentenced-more-injured-by-gunshots-and-disappeared/
 vonjimaika : http://www.letscorp.net/archives/52085
 olona miisa 27 no namoy ny ainy: http://www.uighurbiz.net/archives/16109
 fampahalalam-baovaom-panjakana ho toy ny “fanafihana miharo fampihorohoroana”: http://news.takungpao.com/opinion/highlights/2013-06/1717468.html
 politikan'ny Zaza Tokana : http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/08/chinas-one-child-policy
 Jona 2009, dia nakatso nandritry ny andro vitsy ny Aterineto : http://www.peacehall.com/forum/200906/renquan2008/173111.shtml